Ahavitana fanaka ara-damaody ihany koa
Iza indray moa no tsy mahalala ireny zavamaniry antsoina hoe « tsikafokafona » ireny raha mbola eto Madagasikara, indrindra ireo mponina eny amin ‘ny faritra iva? Asa anefa, raha mba efa noeritreretinao fa ireny zavamaniry hitantsika miaina sy maniry anatin’ny rano maloto sy hita lalandava eny amin’ireny rano miandrona eny rehetra eny ireny anie ka indray andro any mety ho tonga ao an-tokantranonao ary azo ampiasaina amin’ny fiainana andavanandro? Raha ny volotsangana (bambou), ny ravin’akondro (abaca), ny rotin, ny loom ary ny teck no akoran-javamaniry nampiasan’ny olona hanamboarana fanaka teo aloha dia mahazo vahana kosa ankehitriny ny tsikafokafona ary toa zary lasa lamaody mihitsy ny fanaka vita amin’ny tsikafona any am-pitandranomasina any.Taona vitsivitsy izao no nanaovana fikarohana mikasika ny hamadihana ny tsikafona ho fitaovana fampiasa ao an-tokantrano, toy ny fandriana, ny seza fametraka amin’ny efitrano fandraisam-bahiny, ny latabatra, ny haingon-trano maro isan-karazany. Misy koa ireo fitaovana azo ampiasaina eny an-tokontany sy eny anjaridaina..
Noheverina ho tsisy dikany….
Iaraha-mahalala fa zavamaniry haingam-ptombo indrindra eto an-tany ny tsikafonkafona izay antsoina amin’ny anarana hoe “calamote” ihany koa. Eo anelanelan’ny 0,5 m ka hatramin’ny 1m isan’andro ny fitombon’ny tahony.. Mandrakotra haingana dia haingana ny velaran’ny ny rano aniriany ny tsikafokafona ka tsy ahafahan’ny zavamaniry mivelona anaty rano sasany miaina.noho ny tsy fahazoan’izy ireo masoandro. Mitroka ny rivotra iainan’ny zavamaniry maro ihany koa ity tsikafona ity indrindra amin’ny alina. Midika izany fa zavatra tsy dia tsara loatra no bestaka entin’ny tsikafona ankoatran’izy manaratsy endrika izay faritra misy azy. Firenena miisa 50 aty amin’ny tany mafana manerana ny kaontinanta dimy no tena ahitana azy io. Voalaza kosa fa tany Amazonie sy tany amin’ny faritr’I Pantanal, Andrefan’I Brezila ary tany Salvador no niandohan’ny tsikafokafona.
… Hay mahavita zavatra tsara
Noho ity tsikafona ity haingam-pitombo tokoa dia nikaroka hevitra ny manam-pahaizana mba hamadihana azy io ho zavamaniry mahasoa. Tany amin’ny faritra sasany any Afrika ohatra dia nanaovana andrana ary nahodina ho zezika ny tsikafona. Nandramana ho sakafom-biby ihany koa ny voninkazony Ry zareo Sinoa ihany koa no tena nampiasa ny tsikafona ho sakafom-biby toy ny gana sy ny kisoa, nandritra ny 20 taona teo ho eo. Amin’izao fotoana dia efa afaka handiovana rano maloto ihany koa ireny zavamaniry ireny.
Fa ny tena zava-dehibe sady mahasoa indrindra azo avy amin’ny tsikafona dia ny fanaka. Mandeha mihitsy ny fotazana ny tsikafona any Birmanie sy Thaïlande ary Vietnam. Ireo firenena ireo no anisan’ny mpamongady ny fanaka vita avy amin’ny tsikafona be indrindra. Mahatratra hatrany amin’ny 300 sm ny halavan’ny fakan’izy ireny. ka io fakany io no ampiasaina amin’ny fanamboarana fanaka fanao ao an-tokantrano sy eny an-jaridaina.. Be mpitady tokoa ary tena lasa lamaody mihitsy ny fanaka vita avy amin’ny tsikafona any am-pita any amin’izao fotoana. Voalaza mantsy fa ireo fibra nalaina tamin’ny fakan’ny tsikafona izay nanamboarana fanaka ireny dia mampafana tokoa ka tena ilaina amin’ny torimaso ohatra ary manome tontolo iainana natoraly ao an-tokantrano.Dingana maro no arahana vao mahavita iray fanaka avy amin’ny tsikafona. Manomboka any amin’ny fiotazana, ny fanamainana ireo faka, ny fandrandranana ireo faka rehefa avy nadrahona sy namainaina, ny fanenomana, ny fijerena ny pitsopitsony madinidinika farany izay vao tonga any amin’ny fanaka.
Asa raha mba mety hahavita zavatra toy izany isika Malagasy Ho anareo mpandraharaha, mba misy torohevitra kely ity. Sao mba mety hahasoa ny hananganana orinasa hamadihana ny tsikafona ho fanaka satria ny akora voalohany ampiasaina efa mameno ny tanana. Sady hampihena ny firongatry ny tsikafona izany no tafiditra ao anatin’ny fampiroboroboana ny sehatra ara-ekonima ihany koa . Tombontsoa lehibe tokoa raha mba tanteraka eto amintsika izany satria dia hadio ny tanana ary hihena ny olona tsy an’asa.